Iyo Bill Gates 'quantum dots' iyo isina waya ID kadhi iyo inocherekedza kana iwe uine coronavirus uye kana iwe wakachengetedzwa: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 23 March 2020	• 7 Comments
Munguva yeReddit 'bvunza chaunoda' musangano, Bill Gates akabvunzwa mubvunzo nezve covid-19 coronavirus dambudziko. Mhinduro yake yairatidza. Iye ndokuti:Pakupedzisira, tichava nenhamba dzezvitupa zvedijitivhiti kuratidza uyo achangobva kugadziriswa kana kuedzwa uye ndiani akawana mushonga.“Nezita zvitupa zvepadigital, Bill Gates anogona kureva, semuenzaniso, izvo zvakagadzirwa neMIT quantum dots (quantum dots).
Yakadaro isina waya mhinduro inogona kuenda kunopindirana nekusvitswa kwe ID2020, iyo inoda kupa vanhu mabhiriyoni 1,2 vachiri kurarama vasina ID kadhi “chitupa” (iwe hauna izvozvo pasina nhamba). Bill Gates mubatsiri mukuru wemari mukati zvinhu izvi zvese kubudikidza neBill & Melinda Gates hwaro uye nezviri pachena kuti isu tiri kuenda kunodzora system iyo ichambundirwa nevakawanda nekutya muvengi mukuru asingaoneki.
Izvo zvakakosha kuratidza kuti vanhu vanoda kupa masimba avo ese akasununguka kana vakatya zvakakwana. Kutya kwakanyanya kutya kutya, uye kana tave kuita nemuvengi asingaoneki uyo vese vekurapa uye vezvenhau uye vezvematongerwo enyika vanodana kuti titore zvakakurisa, vanhu vazhinji vanonyepa kumusana kwavo.
Vazhinji havana ruzivo nezve mukana ungashandiswa nehurumende uye vezvenhau pakutamba pamasasi. Ipapo vanhu vakawandisa vangazoshanda pane kunyepa. Hapana munhu anogona kufunga kuti radar zhinji muwachi havaoni dial uye nokudaro havana zano ivo pachavo. Hapana munhu anogona kutenda kuti akawanda anogona kunge akatokanganiswa, nechikafu chavo iyezvino neramangwana (ivo vanofunga) yatotengwa kare.
Izvo zvinonyanyisa kutyisa neiyo coronavirus here? Zvadaro zvinobatsira kuti isu tizive chaizvo kuti ndiani akatapukirwa apo, kana mumwe munhu apora uye kana mumwe munhu akaiswa jekiseni. Zvirinani, ichocho iko kutenda kunosimbiswa mumasaisai. Iyo nzira inokwanisika inotorwa haibvumirwe. Uku kuderera kunoonekwa kunyange sekusafunga uye zano rehana.
Mumavhiki mashoma, chero munhu anotsoropodza angave angaonekwa aine njodzi munharaunda. Izvi zvinodaro nekuti vanhu avo vanogona kuve vanopandukira uye vachiisa vamwe panjodzi; kunyangwe iyo iri kutoomerera kune 'pfungwa dzisina kunaka'. Saka sunga. Mushure mezvose, iyo GGZ yekumanikidzwa yehutano hwekuchengetedza hutano chiitiko chatoita basa kubva 1 Ndira.
Kana, mumwedzi mishoma 'yenguva, isu takashandurwa kubva kune sham democracy kuva tekinoroji komisheni system mune imwe mwedzi neiyi dambudziko re coronavirus, munhu wese zvino ave kuvimba nehurumende maererano nemari. iyi tsanangudzo. Iyo karoti pamberi pechimiro chekuchengetedzeka kwemari ichaguza vazhinji munguva yekutya. Kutya kunotyisa kwerufu uye huwandu hukuru hwerufu (hwakaratidzwa nevezvenhau) huchagadzirawo nzira yematanho edanho, umo zvinhu zvine ngozi kubva munharaunda (pasina chero kuchema) zvinogona kubviswa.
Ipapo chikamu chinosara chehuwandu chinobatika muchimiro chedijitari chinotarisa mafambiro ese, chinobatanidza mari uye kushandiswa pamwe nerusununguko rwekufamba kune hunhu, hutano nekumanikidza mishonga uye yekudzivirira. Kwavaifunga kuti kwaizovimbisa rusununguko rwavo nekuchengetedzeka nekubata ruoko rwenyika (kana kurwira bato renyika kunze kwekutya kana udyire), ipapo naivowo vanozopedzisira vabatwa. Hapana chinomira munzira yekusvika kwekupedzisira sekutsanangurwa mubhuku rangu.
Ndokumbirawo kuti muverenge zvinyorwa kubva svondo rapfuura, umo ini ndinotsanangura mamiriro ari pamusoro apa sketch mune rumwe ruzivo. Kana iwe ukaverenga bhuku rangu uye nezvakawedzerwa, iwe uchaona kuti haudi ID kadhi, ID nhamba yehuwandu kana chero chinhu chako kuti uve chaicho. Iwe unogona zvakare kuona kuti kune tariro yei kune wese munhu anoziva.
Source chinyorwa listings: yemumu.com, id2020.org, yakora.com
Tags: bhiri, coronavirus, Covid-19, dots, Featured, hwaro, Gates, ID2020, Melinda, dambudziko, Quantum, Reddit
24 March 2020 pa 01: 28
Bhurawuti Gates network nenzira yechisikigo inotungamira kune zvakajairwa vanofungidzirwa, zvikamu izvo zvinotsigirwa mari pamwe chete neMicrosoft, Gavi Unilever, Carbyne, Postcode Loterij, iyo pakupedzisira haisiri kudarika masangano epamberi.
Anokosha spy mune ino network inogona kubatana naEpstein yakafumurwa pachena munguva pfupi yapfuura.
24 March 2020 pa 01: 29
24 March 2020 pa 10: 44
@Salmon, hazvishamise kana iwe ukaona maresi arikuita.
24 March 2020 pa 12: 40
iyi yekubatana neyeCommunitarian ajenda inonakidza kwazvo, inosimbiswa kubva kwakasiyana nzira.
Kubvunzurudza: Muchiitiko Iwe Hauna Kucherechedzwa, Uyu A Bolshevist Takeover West Wide
Ndiyo New World Order yekushandisa Agenda 2030 uye yavo 'Communismanism', inongova Chikomunizimu 2.0.
24 March 2020 pa 16: 01
Unilever inobatanidzwa zvechokwadi yakapihwa zviitiko zvechangobva kuitika, Rutte haana kubva ku Unilever?
MuAmerica ivo zvakare vakangoerekana vaunza Law Amendment, inondiyeuchidza nezvePatriot Act. Asi izvo zvichaitika zvechokwadi zvangove zvangoitika
26 March 2020 pa 02: 11
Fauci: 'Hapana mubvunzo' VaTrump vachasangana nekushamisika chirwere chinotapukira kubuda
Anthony S. Fauci, MD, director weNational Institute of Allergy uye Utachiona hwezvirwere, akati "hapana panikiro" Donald J. Trump achasangana nekuputika kwechirwere chinotapukira panguva yehutungamiriri hwavo.
27 March 2020 pa 05: 44
Pachave neChishamiso Chakabuda
« Coronavirus, nzanga inomesa kana kuwana vanhu?
Ndokumbira utarise: iyo Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) zvinyorwa zvinyorwa zvisiri zvemanyepo »
Martin Vrijland op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
ongorora op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
ellysa op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
SandinG op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?